Ecrebo: manokana ny traikefa POS | Martech Zone
Alarobia, Martsa 1, 2017 Alakamisy 2 martsa 2017 Douglas Karr
Ny fandrosoana amin'ny teknolojia dia manome fotoana mahomby amin'ny orinasa hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa. Ny fanaovana personalization dia tsy mahasoa fotsiny ho an'ny orinasa fa ankafizin'ny mpanjifa izany. Tianay ireo orinasa izay fantatsika matetika hoe iza isika, manome valisoa anay noho ny fialokalofanay, ary hanao tolo-kevitra aminay rehefa eo ny dia mividy.
Fotoana iray toy izany no antsoina POS Marketing. Ny POS dia mijoro ho Point of Sale, ary io no fitaovana ampiasain'ny fivarotana antsinjarany hanamarinana anao. Matetika ireo orinasa manana rafitra tsy fivadihana sy karatra fihenam-bidy hanarahana ny fividianana ny mpanjifa… fa ny angona matetika no voaangona ary ampiasaina any aoriana mba hivarotra amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny mailaka na mailaka mivantana.
Ahoana raha afaka miditra amin'ny angon-drakitra avy hatrany ianao ary mifandray mivantana amin'ny fizahana? Ity no fotoana mety amin'ny POS Marketing.
Ecrebo dia sehatra iray amin'ny sehatry ny varotra varotra izay ahafahan'ny mpivarotra mandefa tolotra kendrena amin'ny mpanjifa amin'ny fizahana miaraka amin'ny tapakila na tapakila nomerika. miaraka mihoatra ny 90% ny fifanakalozana mitranga ao amin'ny magazay, Teknolojia mifototra amin'ny POS an'ny Ecrebo dia ahafahan'ny mpivarotra manantanteraka ny fifandraisana varotra kendrena natao manokana ho an'ny mpanjifa tsirairay.
Ny mpanjifa dia mahazo tombony amin'ny fahazoana tolotra mifanaraka sy fandrisihana omena amin'ny fomba mety sy tsy mampiditra. Ecrebo fahefana teboka varotra ho an'ny marika mitarika ao anatin'izany Waitrose (Grocery), M & S (magazay) sy Pandora (Firavaka).
Kitapo lasibatra amin'ny Checkout - Manaterà tolotra sy hafatra miorina amin'ny fividianana entana tena ilaina indrindra amin'ny mpivarotra an-tsena. Mampiroborobo ny varotra mitombo, mampiroborobo ny fividianana sokajy, ary manatsara ny tsy fivadihan'ny mpanjifa.
Raisina nomerika nomerika manokana - Atolory ny mpanjifanao fomba mety kokoa handraisana sy hitahirizany ny taratasiny. Ny tapakila nomerika dia manatsara ny traikefan'ny mpanjifa ary manokatra fantsona marketing aorian'ny fividianana.
Pandora, iray amin'ireo marika firavaka lehibe indrindra eto an-tany, izao dia mampiasa Ecrebo hanaterana tapakila nomerika manerana ny trano fivarotana UK matanjaka 220. Ny tapakila dia alefa amin'ny mailaka amin'ny mpanjifa aorian'ny fifampiraharahana misy azy ireo ary asiana safidy hisafidy ny handray taratasim-baovao mahazatra, ary koa ny fangatahana valin-kafatra ho an'ny mpanjifa, ahafahan'ny mpiantsena maneho hevitra momba ny zavatra niainany tao amin'ny magazay.
Ampiasainay koa ny tapakila dizitaly ho toy ny fotoana ahafahana mangataka valiny amin'ny mpanjifantsika momba ny traikefany amin'ny fivarotana, ahafahanay manatsara hatrany ny fanoloranay. Jo Glynn-Smith, VP an'ny Marketing, PANDORA UK
Ecrebo Averina averina any amin'ny mpitantana fivarotana sy ny foiben'ny PANDORA UK ny angon-drakitra hanampiana ny orinasa hahatakatra ny fahombiazan'ny fivarotan'izy ireo ary koa hamantatra izay faritra tokony hatsaraina.
Tags: Zahao hoetapakila fanamarinanatapakilaecreboM & SPandorapersonalizationpos manokanatapakila manokanatoerana amidymarketing, point of saleteboka fivarotanaposWaitrose